‘Raha Tsy Manohitra Ny Jadona Aho, Mbola Olona Ve?’: Shinoa Mpikatroka Nohelohina Higadra Valo Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2018 7:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Italiano, عربي, English
Wu Gan avy amin'ny Apple Daily News. Lisansa fampiasàna tsy hitadiavam-bola.
“Ho an'ireo miaina ambany jadona, ny fanomezana ny anaram-boninahitra ho olona “manohintohina ny fitondràna” no endrika faratampony amin'ny fanamafisana ny maha-olompirenena.”
Ilay shinoa mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, Wu Gan, no nanao io fanambaràna io ho an'ny fitsaràna iray tao Tianjin taorian'ny nandraisany ny sazy famonjàna mandritry ny valo taona, ny 26 Desambra 2017 lasa teo. Tany ampiandohan'ny Janoary, nanao fampakarana ny didy fanamelohana azy izy.
Nanomboka tamin'ny 2008 i Wu Gan, fantatra kokoa amin'ny solonanarany “Mpanimbinkena Faran'izay Fatritrany”, no efa navitrika tao anatin'ny faribolan'ireo Shinoa mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, fony izy nanomboka nanao fanentanana ho an'i Deng Yujiao, ilay mpandroso sakafo nohelohina ho namono olona rehefa nanindrona antsy sy nahafaty manampahefana iray avy amin'ny governemanta saika hanolana azy.
Azony io solonanarany io taorian'ny nanoratany lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy momba ny “fomba fandrasàna kisoa” (sarinteny entina milaza ny fandabohana ireo manampahefana mpanao kolikoly) ary avy amin'izany no nipetahan'ny lazany ho “mpanimbinkena”. Raha niresaka tao amin'ny bilaogy Sinosphere an'ny New York Times, nohazavain'ny mpisolovava an'i Wu, Ge Wenxiu, fa io anarana io dia natao hanesoana ny fampiasàn'ireo manampahefana ao amin'ny fitondràna ny teny hoe fatritrany, arahana sosokevitra manebaka hoe tiany “horasaina” hiala amin'ireo manampahefana ny kolikoly sy ny tsy fahaizan'izy ireo mitondra tena.
Tamin'ny 2015 i Wu no nosamborina, taorian'ny hetsi-panoherana iray nitranga teo ivelan'ny fitsarana iray tao amin'ny faritanin'i Jiangxi momba ny raharaha fanolànana sy vono olona izay nandàvana ny mpiaro tsy ho hahazo mijery ireo antontan-taratasim-pitsaràna. Ny fisamborana azy no nanamarika ny fiandohan'ny famoretana nanerana ny firenena natao an'ireo mpisolovava sady mpikatroka ho an'ny zon'olombelona.
Tany am-boalohany izy dia nampangaina ho “nikitikitika fifandirana nitarika korontana” ary fanalàna baràka, saingy taorian'ny nandàvany hibaboka ny heloka nataony dia novain'ny polisy ny fiampangàna azy ka lasa “fanohintohinana ny fahefam-panjakàna.”
Nohazavain'i Wu tao anatin'ny fanambaràny (nandalo tamin'ny China Change) hoe nolaviny ny hanao fibabohana imasom-bahoaka ho takalon'ny fanamaivanana ny saziny:
“Ho an'ireo miaina ambany jadona, ny fanomezana ny anaram-boninahitra ho olona “manohintohina ny fitondràna” no endrika faratampony amin'ny fanamafisana ny maha-olompirenena.” Porofo izany fa tsy mpiray tsikombakomba na andevo akory ny olompirenena, ary farafaharatsiny nivoaka izy ary niaro, nitolona ho an'ny zon'olombelona. Liang Qichao (梁启超, reformista malaza tamin'ny faramparan'ny fitondran'ny ankohonam-panjaka Qing ) nilaza fa izy sy ny jadona dia hery roa mifanipaka toy ny atsimo sy avaratra; Hoy aho: Raha Tsy Manohitra Ny Jadona Aho, Mbola Olona Ve?
Nezahan-dry zareo ny hibabohan'ny tenako ho meloka ary hiara-hiasa amin'izy ireo hamokatra ny fampielezankeviny ho takalon'ny sazy maivamaivana kokoa — Nolazain-dry zareo mihitsy aza fa raha mibaboka hoe meloka aho, sazy mihantona telo taona no homen'izy ireo ho ahy. Nolaviko daholo izany rehetra izany. Tsy hamadika ahy ho olona tsy mendrika na very fanantenana raha izay sazy valo taona nomena ahy. Nofidiako samirery ho ahy ity: rehefa manohitra jadona ianao, midika izany fa efa vonona ny hanitsaka ny làlana mitondra ho any am-ponja.
Kivy tanteraka ireo naman'i Wu Gan teo am-pandrenesana ny vaovao momba ny saziny. Tao amin'ny Twitter, nilaza i Old Winer hoe :
Nisesy tsirairay, voasazy hiditra am-ponja daholo ny namako. Ankoatry ny hatezerana, betsaka ny fihetsehampo mifamahofaho ato anatiko: faniriako ny hitazonan'ireo namako ny fotokevitra ijoroany, toa an'i Mpanimbinkena (Butcher). Etsy ankilany, tsy tiako hisedra fampijaliana sy haniry hisian'ny marimaritra ry zareo. Hajaiko i Butcher ary takatro ihany koa ny manjo ireo manao marimaritra. Taona vaovao izao, na rahoviana na rahoviana aho misaina momba ireo naiditra am-ponja, marary ny foko ary mahatsiaro ho tsy mahefa na inona na inona.
Taorian'ny nanapariahana be ilay fanambaràn'i Wu, nisy andianà fampielezankevitra nipoitra natao fotsiny hamelezana azy sy ireo mpisolovava hafa mpiaro zon'olombelona. Maro ireo boto ao amin'ny Twitter manaparitaka lahatsoratra (ohatra isa, roa, telo sy ny maro hafa) hiampangàna an'i Wu Gan ho nampian'i Shina nanangona tombontsoa manokana tamin'ny alàlan'ny fikatrohana tety anaty aterineto.
Amin'ny fahafantarana fa tototry ny tsy fahatokisana intsony ny tontolon'ny vondrom-piarahamonin'ireo Shinoa mpanohitra, nosoratan'i Wu Gan ny taratasy iray ho an'ny vondrom-piarahamonina Twitter Shinoa, manainga azy ireo hitohy amin'ny fiarovana ny fahalalahana sy ny fahatsiarovantena, tamin'ny 31 Desambra:
Iriko tsy ho voakombom-bava ireo mpiara-mitolona ivelan'[ny Aroafo Lehibe] ary tsy ho tototry ny hakiviana. Tsy olana izay haratsin'ny toedraharaha, azonareo atao ny miray tsikombakomba [amin'ny mpanao jadona]. Azontsika atao ny mikorontan-tsaina sy matahotra, saingy tsy azontsika atao ny tsy hijery ny zavamisy mahatsiravina ka hilaza lainga mifanohitra amin'ny fahatsapàna iraisain'ny rehetra, na haka sary ao an-tsaina hoe hisy amperora mahiratsaina ho afaka hanavotra antsika, na hoe hisy tolona ho vita tsy arahana ezaka. Tsy maintsy aelintsika ny marina, arovantsika ny fahatsiarovantena, hajaintsika ny fahalalana, amporisihantsika ny fahasahiana. Samy manana ny halemeny ny tsirairay, na izaho aza. Saingy mino aho fa miaraka amin'ny fisokafana amin'ireo hevitra maro, hitera-bokatra ny fahaizana manakatra bebe kokoa, ary tsy fanaovana kajikajy tafahoatra ho amin'ny tombontsoan'ny tena manokana sy ny fihetsehana..Ny zavamisy dia tsapako ny fanohananareo ary porofo tsara indrindra amin'izany ny fifantohantsainareo.
Farany, tiako ny hindrana ilay fehezanteny iray avy amin'ny The Shawshank Redemption manao hoe: misy vorona sasantsasany tsy fanao anaty tranomborona. Entin'ny rain'izy ireny ny lokon'ny fahalalahana . [Ny fitanisàna niaingana voalohany avy amin'i Stephen King dia: tsy natao ho fefena anaty tranomborona ny vorona sasany. Mamiratra fatratra ny rain'izy ireny. Ary rehefa mikopak'elatra manidina ry zareo, tena faly ilay ampahany ao aminao izay efa nahafantatra hatrany am-piaingàna fa heloka ny manidy azy ireny.]
Ho valin'ilay taratasy, ilay Shinoa bekotron'ny fikatrohana, Wu’er Kaixi, avy amin'ilay hetsika mpandàla ny demaokrasia tao Tiananmen 1989 nanoratra hoe :
Androany, ndeha ho atrehantsika amin'ny fomba manetriketra ny hoavy. Tsy miaina anaty fotoana tsara / mahafinaritra isika, saingy afaka ny ho olona tsara. Mety manohina antsika i Butcher ary alaintsika ho safidy ny hafanampo tsy misy tahotra. Ny tsy fananantsika tahotra no hibakana ny horohoro sy hanova ny fotoanantsika ho tsara kokoa. Antenaiko ho teboka fanombohana an'izay fomba fisaina izay ny 2018. Arahaba daholo nahatratra taona vaovao!
Ny 8 Janoary 2018 teo, nameno antontan-taratasy fampakarana didim-pitsaràna ny mpisolovava an'i Wu Gan (dika amin'ny teny anglisy avy amin'ny China Change) hiarovana ny zon'ny olompirenena halalaka haneho hevitra:
Rehefa mamoahana didim-pitsarana milaza hoe meloka na tsia ny fitondrantenan'ny olona iray, zavadehibe tokoa ny fandinihana ny endriky ny hetsika nataon'izy ireny. Ireo hetsika nataon'ny mpampakatra didy — na resaka natao tamin'ny Weibo, WeChat, Twitter, sy ny “Taridàlana” telo azy manokana, ireo tafa nifanaovany tamin'ireo gazety avy any ivelany, na ireo famelabelarana tamin'ny alàlan'ny feo nampitaina — ireny rehetra ireny dia samy voafehin'ny andàlana miresaka ny fampiasàna ara-drariny ny zo momba ny fahalalahana maneho hevitra. Tsy misy hafa amin'izany, ny fandraisana anjaran'ny mpampakatra didy tao anatin'ireo raharaha 12 voatanisa — izay nisy ireo hetsi-panoherana ‘mijoro-mijery-fotsiny’, niantsoana fanohanana ho anà tolona iray, fanangonana vola, na fanehoana ataon'ny tena samirery amin'ny alàlan'ny taokanto — dia fanehoana daholo koa ny fahalalahana maneho hevitra, omen'ny zo sivily ho azy: zo hanakiana sy hanome sosokevitra; ho afaka hanao fampakàrana didy sy hitaraina; zo hanao tatitra sy hampibaribary fomba fanao tsy mety, sy ny sisa. Hatrany am-bohoka ireny zo ireny, ary nomen'ny lalàm-panorenana sy ny lalànan'ny Repoblika Entimbahoakan'i Shina. Ny fampiasàna ireny zo ireny dia tsy misy ifandraisany na kely aza amin'ilay lazaina fa fanohintohinana ny fahefàm-panjakàna.